क्यान्सरबाट छुट्कारा पाउन साइकल चलाउनुस् - IAUA
क्यान्सरबाट छुट्कारा पाउन साइकल चलाउनुस्
ramkrishna November 30, 2017	क्यान्सरबाट छुट्कारा पाउन साइकल चलाउनुस्
तपाईं लामो जिन्दगी चाहनुहुन्छ ? क्यान्सको खतरा कम गर्न चाहनुहुन्छ ? चाहनुहुन्छ भने साइकल चलाउन सुरु गरिहाल्नुहोस्, यो वैज्ञानिकहरुको भनाइ हो । अध्ययनका अनुसारई साइलकको प्रयोगले मुटुको विरामी तथा क्यान्सरमा कमी आउने छ ।
बेलायतमा नियमित आउजाउ गर्ने साढे २ लाख मानिसमा गरिएको एक अध्ययन अनुसार सार्वजनिक यातायात या कारमा यात्रा गनेए भन्दा पैदल हिड्नु बढी फाइदाजनक पाइएको छ । ग्लासगोको टीमका अनुसार एक पटक नियमित कामकाजमा लागेपछि साइकल चलाउनका लागि कुनै इच्छाशक्तिको आवश्यकता हुँदैन । जसरी जिम जानका लागि सवै तयार हुन्छन् । पाच वर्षको अध्ययनमा सक्रिय जीवनयापन गर्ने मानिसको तुलान स्थिर रहेनेसँग नहुने देखाएको छ ।
अध्ययन गरिएका मध्ये २४३० मासिनको मृत्यु भएको छ, ३७४८ मानिसलाई क्यान्सर भएको छ, १११० मानिसलाई मुटुसँग सम्बन्धित समस्या देखिएको छ । तर अध्ययनको क्रममा लगातार साइकल चलाउनेमा कुनै पनि कारणबाट हुने मृत्युको खतरा ४१ प्रतिशत कम पाइएको छ । यीनिहरुमा ४५ प्रतिशत क्यान्सर तथा ४६ प्रतिशतमा मुटुको विरामी भएको पाइएको छ । अध्ययनका अनुसार औसत करिब हप्तामा ४८ किलोमिटर साइकल चलाएका छन्, तर यसभन्दा धेरै समय साइलक चलाउँदा उनीहरुलाई थप फाइदा मिलेको थियो ।
ग्लासगो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा जेसन गिलले बीबीसीलाई भने,‘यो प्रमाण हो की जो मानिस क्रियाशील तरिकाबाट यात्रा गर्छन, खासगरेर साइलकमा उनीहरुलाई कम क्यान्सको कम खतरा छ । हामीले साइल चलाउने क्रमलाई बानीको रुपमा विकास गर्न आवश्यक छ ।’ वजन घटाउँदा नघट्ने केही रोगहरुसमेत साइल चलाउँदा घट्ने अध्ययने जनाएको छ ।
Previous Previous post: मेरो सङ्घर्ष केवल प्राप्तिको लागि मात्र होइन ।
Next Next post: थाङ्कामा नलेखिएको जीवन